Indlela yokulwa ne-cellulite - Indlela yokulahla i-cellulite kumadoda | Amadoda aneSitayile
UAlicia tomero | 31/10/2021 20:21 | Ukunyamekela, Kufanelekile, ukuphila qete, ZeMpilo
I-cellulite eyonwabileyo kukubunjwa okucaphukisayo kwamafutha ichaphazela amadoda nabafazi. Ubukhulu becala yimeko enxulunyaniswa ngakumbi nabasetyhini ukusukela oko kunokwenzeka ukuba bahlupheke ngakumbi, kodwa kukho amadoda amaninzi abandezeleka ngokufanayo. Ngenxa yale nyaniso, bayazibuza ukuba yintoni kunye nendlela yokulwa ne-cellulite.
Le cellulite ukugcwala kwamaqhuqhuva atyebileyo ezithi zigxile okanye ziqokelelwe kwiindawo ezifana imilenze, iimpundu okanye isisu. Yinto eyenzekayo ongayithandiyo kuba ezi ndawo ziba sesichengeni kakhulu ukuba zingatyeba kwaye awuyithandi. Kufuphi I-10% yamadoda aphethwe yiyo Kwaye into yokuba abasetyhini bahlupheke kuyo inento eninzi yokwenza nenani eliphezulu le-estrogens emzimbeni wabo.
1 Yintoni i-cellulite?
2 Kutheni amadoda ehlushwa yi-cellulite
2.2 Iingxaki zeHormonal kunye nemfuzo
2.3 Indlela yokulwa kunye nokuphelisa i-cellulite?
Zizigaqa zamanqatha ukuba kwakheka phantsi kwesikhumba ukwenza imiqolo okanye iidimples ukuba into ebizwa ngokuba yi "orange peel". Amaqhuqhuva atyebileyo abumbayo avuthe kwaye abonakale evelisa umthamo omncinci ongathandekiyo onokuchaphazela ukuzithemba. Malunga ne-85% yabasetyhini abahluphekayo.
Kutheni amadoda ehlushwa yi-cellulite
Amadoda afumana i-cellulite ngokwahlukileyo kwabasetyhini. Ayaziwa ukuba kutheni le nto ibangelwa, kodwa ezinye izinto zinokubangela isiganeko esinjalo, kuquka naso indlela yokuphila, ukutya, ufuzo okanye ubukho behomoni.
Sisitshixo sokuba lo mba uvele. Ukutya okutyebileyo ngamafutha ahluthayo okanye ngomthamo ophezulu weeswekile ezisulungekisiweyo kuya kubangela ukusasazeka kwayo kwisibhakabhaka. Eminye imikhwa onokuthi uyichaphazele kukusela utywala, unikwe yona inani eliphezulu leekhalori kunye nokutshaya icuba.
Indlela yokuphila yokuhlala phantsi kunye noxinzelelo
Yeyona ndlela iphambili yokwenza i-cellulite kwaye ihlale ixesha elide emzimbeni. Ukuba umzimba awusetyenziswanga akukho nkcitho yeekhalori, kwaye iikhalori azisetyenziswanga ziguqulwa zibe ngamafutha. Ukongeza, indlela yokuphila yokuhlala phantsi ivelisa iingxaki ezininzi ngakumbi emzimbeni kunye ne-pathologies engenakubalwa.
Enye into enempembelelo kakhulu uxinzelelo, ekubeni umzimba uphelelwe yihomoni kwaye ulungelelanise ukujikeleza kwegazi lakho kuphazamiseka, ke ukugcinwa kwamanzi kukho kwaye ngenxa yoko ukubonakala kwamanqatha.
Iingxaki zeHormonal kunye nemfuzo
Nangona ingabasetyhini ikakhulu abanale ngxaki, amadoda anokuba nayo ukungalingani okunxulunyaniswa ne-estrogens. Ngokubhekiselele kwi-genetics, i-genetic factor yenye yezinto ezibangela izinto ezinkulu, okufanayo kwenzeka nge-alopecia. Uhlobo lwe-cellulite okanye apho luvela khona luya kuba sesinye sezizathu.
Indlela yokulwa kunye nokuphelisa i-cellulite?
Kukho iintlobo ezintathu ze-cellulite ezinokuvela kwaye ngoko abafana abathathu ukulwa. Kuyinyani ukuba ulusu lwamadoda lukhulu kakhulu kunolwasetyhini, ngoko ke ukubonakala kwayo kufihlwe ngakumbi.
Eyona nto ilungileyo phila ubomi obusebenzayo, apho ndazi khona dlala imidlalo kwaye womeleze izihlunu zakho. Ukutya okuncinci kunamafutha, iswekile kunye notywala kunceda ukulwa kunye nokuqala ukuphelisa i-cellulite esele ikhona. Ukuba awunawo amandla okuzimisela, eyona njongo kukuzibeka kwizandla zengcali kunye nesondlo. Kuya kukunceda ukhethe ukutya okugqwesileyo kwaye iya kukubeka iliso ngokwakho ngokuzilolonga kunye nokutya kwakho ngokuxhomekeke kwindlela ophila ngayo.
Kukho unyango olunokukhawulezisa inkqubo kwaye alufuni utyando. Enye yazo kwaye isetyenziswa ngabasetyhini amaza erediyo, apho ubushushu busetyenziselwa ukuvuselela i-collagen. Olu bushushu luya kunceda ukutshabalalisa i-cellulite emva kweeseshoni ezininzi kwaye kuya kunceda ukuqinisa ulusu. Ukuze ukwazi ukuqaphela uphuculo, ubuncinane iiseshoni ezili-10 ziyafuneka.
Unyango lweMesotherapy Isetyenziswa njengenye indlela kwaye inika iziphumo ezihle kakhulu. Imalunga ne iinaliti ezincinci zezinto ezahlukeneyo, phakathi kwabo amayeza, okuya kunceda ukutshabalalisa ama-nodules anamafutha.
Amadoda abe notyekelo eliphezulu lokuncipha ngendlela engcono kunye nendlela kunabafazi. Ukuzilolonga kathathu ukuya kwamane ngeveki kuya kufuneka ukuba uqaphele utshintsho. Inokuqala ukuqinisa imilenze ukuhambahamba ukuze kusebenze ukuhamba kwegazi. Ukuba into oyifunayo kukususa amanqatha esisu, kuyacetyiswa Yiya niyoqubha. Ngumdlalo ogqibeleleyo oya kukunceda ukhuphe ithoni kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba, kunye ne-cardio yeyona nto iphambili yokwenza kusebenze konke ukujikeleza emzimbeni.
Cellulite emadodeni yinto engathandekiyo, kodwa akuyongxaki xa ubukho bayo bungagqithisi. Kuphela kwaye njengomgaqo iya kuhlala iyingxaki yokujikeleza, apho ukuba ayiphathwanga ingaba nemiphumo kwezinye iingxaki ezinxulumene nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela yokulwa ne-cellulite